Home / Foset Guide / Etu esi azuta ngwa nri ohuru
2020 / 11 / 16 nhazi ọkwaFoset Guide 4669 0
Zụta ọkpọkọ kichin ziri ezi na-adabere n'ụzọ dị ukwuu na pipụ mmiri dị ugbu a. Họrọ ọkpọkọ kichin ọhụrụ nwere ike ịdị mfe karịa ka ị chere ozugbo i chebara nkọwa atọ dị mkpa tupu ịmalite ịzụ ahịa.
E nwere ụdị kichin na kichin dị iche iche dị na kichin, mana ha enweghị dakọtara. Malite site na ị na-ele kichin kichin gị iji hazie ọtụtụ oghere nwere ike ịchọta oghere ọkụ. Nke a metụtara ma ọ bụrụ na ị na-etinye pipụ mmiri ọhụrụ na igwe nri dị ugbu a ma ọ bụ zụta pọmpụ ọhụrụ na sink.
A, kichin fosets nwere ma onye njikwa adiana direction ka mma mmiri okpomọkụ ma ọ bụ abụọ ịlesụ maka inggwakọta na-ekpo ọkụ na mmiri oyi. Gụnyere ihe ndị a bụ sprayer nke na-anọdụ ala ma ọ bụ nkwụsị na-adọpụta ma ọ bụ nkwụsị na-agba agba na nhọrọ ịgba.
Aka-free zụta ihe ọkpọkọ n'ịntanetị ma tinye ihe ohuru na kichin. Ndị a nwere ike imetụ aka ma ọ bụ imegharị ahụ ma gụnye temps na njikwa dị ukwuu, na-eme ka pọmpụ ndị a bụrụ nhọrọ dị mma maka ụlọ nwere ụmụaka. Ihe eji eme ka mmiri na-enweghị aka na-arụ ọrụ nke ọma na nkwupụta echiche zuru ebe niile, na-eme ka ebe obibi dịkwuo mfe ma na-anabata ọkwa ọ bụla nke ike anụ ahụ.
Ọ bụrụ na eriri mmiri dị ugbu a nwere efere echichi na ya, lelee n'okpuru igwe iji hụ ọtụtụ oghere efere efere ahụ na-ekpuchi. Buru n'uche ihe na-esote banyere oghere oghere:
Kitchen fosets nwere ike inwe otu na anọ echichi oghere.
A na-eji oghere atọ maka spout na ejiri aka abụọ.
A na-ejikarị oghere nke anọ eme ihe maka ngwa, dị ka ihe ncha ma ọ bụ ihe nkedo.
Igwe ọhụụ ọhụrụ ọ bụla na-egosi na nkwakọ ngwaahịa ole oghere nwụnye ọ chọrọ maka nrụnye.
Ọ bụrụ n ’ị na-etinye akwọ otu -bọdụ n’ime ebe ịsa ji nwere oghere atọ, nri ga na-ekpuchikarị ohere ndị a na-ejighi.
Ọnọdụ nke oghere ntinye igwe bụ ihe ọzọ iburu n'uche. Ọtụtụ mgbe, sink dị n'akụkụ etiti kichin sink, mana nke a abụghị ọnọdụ ya mgbe niile. Ọ bụrụ na a ga-etinye pọmpụ ahụ n'otu akụkụ nke kichin kichin, mmiri pọmpụ ga-adị ogologo iji nweta bezin nke ọzọ ka nke a wee jiri. Igwe dị elu nke nwere ihe ịgba agba na-agba agba bụ nhọrọ ọzọ maka kichin kichin nwere oghere oghere.
Ebee ka Nkwado ahụ dị?
Gha acho ihe mgbago na elu-ala. Top-ugwu foset jikọọ si n'ime tebulu-elu. A na-ekpuchi kposara ndị ahụ n'okpuru okpu mmiri ahụ. A na-enweta ihe mgbata ala n’elu ugwu nke kacha mma n’elu tebụl. A na-etinye kposara ndị ahụ site na akụkụ kachasị mma nke akụkụ foset.
Lelee Usoro Mmiri
Gbaa mbọ hụ na ọkpọkọ kichin ọhụrụ ị chọrọ dabara na ahịrị mmiri. Legharịa anya n'okpuru sink gị n'okpuru ebe a na-eri nri ma rịba ama etu nnukwu usoro mmiri ọ drinkingụ existingụ ndị dị ugbu a na shugaff valves. Ndị a bụ ụfọdụ ụkpụrụ nduzi iji rụọ ọrụ mgbe ị na-elele ahịrị mmiri na mmanya gị.
Ọ bụrụ na ị maghị etu ahịrị mmiri gị hà, jiri teepu tụọ ha.
Agbanyeghị na ịchọrọ ịchụ nta maka ya, a ga-etinye ọnụ ọgụgụ ya na valvụ ahụ.
Rịba ama na ụlọ ochie nwere ike ọ gaghị enwe valvụ shutoff.
Ọtụtụ ọkpọkọ ndị ọhụrụ gụnyere ahịrị 3/8 nke anụ ọhịa ahụ agbakwunye. Ọ bụrụ na ndị na-ahụkarị mmiri shutoff valves bụ 1/2-na. na nha, ị ga-agbanwe valvụ mechiri emechi na 3/8 nke anụ ọhịa tupu ị tinye eriri mmiri ọhụrụ.
Ọ bụ ihe amamihe dị na ya iji dochie valvụ mechiri emechi mgbe ị na-etinye wiwi ọhụrụ, n'ụzọ ọ bụla, ebe ọ bụ na valvụ vaịn nwere ike ịda ma ọ bụrụ na ịchọrọ imechi mmiri maka nkwụsị ma ọ bụ ndozi ndị ọzọ.
Ọ bụrụ na a ga-ahụ oghere ndọtị maka ihe pọmpụ gị nke dị nso n'otu akụkụ nke sink ahụ, gbaa mbọ hụ na nsị gị toro ogologo nke na ọ na-efegharị ma rute n'akụkụ ọzọ nke bezin ahụ, ọkachasị ma ọ bụrụ na ịnwe mmiri ugboro abụọ. Otu ihe ga - eme ka az ụta ga - azụta ihe toro ogologo ogologo na - adụ adụ ala. Nke a imewe na-ọma ruru eru maka a kichin sink imewe na akụkụ arịọnụ oghere.
Ọbụna ihe dị ka obere ka nke ikpeazụ gị plumbing eletrik nwere ike ime ka ma ọ bụ mebie aesthetics nke gị kichin. Enwere ọtụtụ ntuziaka. Igwe nri kichin gị kwesịrị ikwekọ na ngwụcha nke ngwa ngwa ndị ọzọ, gụnyere obere ikuku ikuku dị iche, ngwa ncha eji arụ ọrụ, na oghere oghere maka oghere ndị anaghị eji. Igwe mmiri nke nwere oke chrome na-enwu gbaa ga-elepụ anya ma ọ bụrụ na ihe ndị ọzọ niile nwere matte brushed nickel elu, dịka ọmụmaatụ.
Nke gara aga :: Etu ị ga - esi bulie igwe mmiri maka ụlọ ịsa ahụ Osote: Kacha mma foset na-eduzi
2020 / 12 / 21 5082
2020 / 11 / 19 3991
2020 / 11 / 18 4281